I-MyKronoz ZeTie ingxube phakathi kwe-smartwatch newashi le-analog | Izindaba zamagajethi
IMyKronoz ZeTime ingxube phakathi kwewashi le-smartwatch ne-analog
Amawashi ama-Smart azoba nentsha yawo yesibili kulo nyaka ka-2017, izinkampani eziningi, zombili ezobuchwepheshe kanye namawashi akudala, zisebenzisa ithuba lokwethula amamodeli amasha ngenhloso yokwenza i-Android Wear 2.0, uhlelo olunekhono ezindaweni eziningi. Leli washi lifika lizoqeda zonke izikimu zethu, hhayi kuphela i-smartwatch enesikrini sokuthinta, futhi akuyona iwashi le-analog, empeleni, yilokho kokubili. Ake sibheke leli washi eliyingqayizivele elingaheha ukunakwa kwama-purists amaningi, ngasikhathi sinye ukuthi lingajabulisa abathandi bezobuchwepheshe, ngezingxenye ezilinganayo.
Uqweqwe lubekwa yimbobo maphakathi kwesikrini, kulapho izinaliti zizotholakala khona. Kodwa-ke, enye into ekhangayo impela ukuthi izinaliti zizohlala izinsuku ezingama-30 zihamba. Vele kuzofanele sikhohlwe ngezici ezihlakaniphe kakhulu zedivayisi. Kuyathakazelisa ukubona ukuthi bazisebenzise kanjani izinaliti zakudala ngaphakathi kwesikrini esiyingqayizivele esiyindilinga, ngomklamo wazo omuhle.
Leli washi liyahambisana nganoma iyiphi idivayisi ye-Android ngaphambi kwe-4.3 Jelly Bean, kanye nakunoma iyiphi i-iPhone ngenhla kwe-iOS 8 (kufakiwe). Kungaba kanjani ngenye indlela, inguqulo enamandla kunayo yonke ye-Bluetooth, i-4.1 BLE, yiyo efakiwe ngaphansi kwaleyo chassis eyingqayizivele.
Leli washi, noma kunjalo, alikatholakali emakethe ejwayelekile. Eqinisweni amanga isebenza kumkhankaso wokubuyisa imali, yize inikezwe ukuthi ishaya kanjani, izodlula kude noma yisiphi isicelo. Ngale ndlela, iwashi le-hybrid lingaba yingxenye yesandla sakho. Elinye iphuzu elehlukile ukuthi imichilo iyindawo yonke, okungukuthi, ungabeka noma yikuphi ukubopha kuyo njengawashi lendabuko. Yebo, ayinamandla wobuchwepheshe ngokweqile, njengoba kungalindelwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » IMyKronoz ZeTime ingxube phakathi kwewashi le-smartwatch ne-analog
I-Qualcomm kufanele isolwe nge-Samsung ngokungathengisi ama-Exynos ayo kubantu besithathu
UDell UltraSharp uyisiqapha se-8K esingashiyi muntu engenandaba